Ingabe ibhizinisi lami liyi-candidate omuhle we-backlinks ekhiqiza?
Amabhizinisi amakhulu ase-intanethi anesabelomali kwi-team ye-SEO yangaphakathi endlini futhi alungele ukutshala imali ebalulekile kuwo wonke amasu okubaluleka okubalulekile anezo zonke amathuba okukhiqiza emuva kwe-backlinks. Kodwa-ke, kumabhizinisi amancane noma asekhaya azama ukugcina ukugeleza kwemali okuhle, ukwakha isixhumanisi kungabonakali isu elibiza izimali.
Ake sixoxe ukuthi ukwakha isixhumanisi kuyindlela yokwenza imali enomsebenzi webhizinisi osanda kusetshenzwa noma akusizi ngalutho ukugxila kwezixhumanisi zangaphandle ukukhiqiza ekugcineni kokusebenza kahle.
Ukubuyisela okungenzeka ungathola kusuka kusixhumanisi sokwakha
Ake sihlolisise ukuthi yisiphi isakhiwo sokuxhumanisa nokuthi singafaka kanjani ukuthuthukiswa kwenjini yethu yokusesha iwebhusayithi. Le nqubo yokusebenza yangaphandle isetshenziselwa ukukhombisa izinjini zokusesha ukuthi isayithi lakho liyigugu kangakanani. Lapho izinjini zokuhlola zihlola imithombo yewebhu efanelwe yizinga eliphakeme kakhulu kukhasi lemiphumela yosesho, linikeza ngokukhethekile ukubaluleka kwemibuzo kanye negunya lamawebhusayithi. Isiza i-Google inikeza abasebenzisi ngemiphumela yokucinga yemiphumela yabo efanelekile. I-Google ihlola igunya lewebhusayithi isebenzisa izici eziningana, ebaluleke kunayo yonke inombolo kanye nekhwalithi yezixhumanisi zangaphandle ezikhomba umthombo wewebhu.
Ukuphakamisa igunya lesixhumanisi, inani elikhulu esayithini lakho lingadlula. I-backlinks igunya limiswe idumela nokuthembeka komthombo wokuxhumanisa kanye nokubaluleka kokuqukethwe lapho kuhlanganiswa khona lesi sixhumanisi. Uma abasebenzisi balandela i-backlink ethile, kungabhekwa njengekhwalithi nokugunyazwa okuphakeme.
Ukuhlanganisa isixhumanisi ngokwakho kuthatha izinzuzo eziningi kuwebhusayithi. Ake sibhale ezinye zazo:
Izixhumanisi ezifakiwe zingakhuphula igunya lesizinda sesayithi lakho noma ziphakamise ithrafikhi ekhasini elithile lomthombo wakho wewebhu ukuze okuyinto okukhonjiswa ngayo. Ngenxa yalokho, i-Google izobheka ukuthi isayithi lakho lihlonishwe kakhulu futhi linikeze isayithi lakho isikhundla esiphezulu futhi ithumele ithrafikhi engaphezulu kwisayithi lakho.
Ukubeka izixhumanisi zakho kokuthunyelwe kwezivakashi nezinye izinhlobo zokuqukethwe kwangaphandle, ulethe ithrafikhi yokudluliselwa kwisayithi lakho. Uma izixhumanisi zakho zizungezwe okuqukethwe kwekhwalithi kanye nokucwaninga okuzokwenza kube nesibalo kulabo abalaleli abahlosiwe, uzothola ithrafikhi kubasebenzisi ngokuchofoza emuva kwe-backlink yakho ngqo ngolwazi oluthe xaxa.
Uma uqhubeka usho igama lakho lomkhiqizo kubhulogi nokuthunyelwe kwamanye amawebhusayithi, ngokushesha noma kamuva, abasebenzisi bazozikhanda ngekhanda. Futhi noma ngabe laba abasebenzisi abachofozi kuzixhumanisi zakho, uzothuthukisa ukubonakala komkhiqizo wakho.
i-ROI (ukubuyiselwa kokutshalwa kwezimali) Ama-Backlink angahlala unomphela, yingakho ukubaluleka kwabo kungakhula ngokuhamba kwesikhathi. Uma utshala imali yakho ngokubeka isixhumanisi unomphela kwelinye lamawebusayithi aphezulu, uzothola ukubuyiswa okuphezulu kulokhu kutshalwa kwezimali ngendlela yokuhamba kwezimoto njalo nokuguqulwa Source .